ထီပေါကျသူက မုနျ့ဖိုး သိနျး ၂၀ တညျး ပေးလို့တဲ့… – Daily Feed MM
အောကျတှငျ ဇျောဂြီဖွငျ့ ဖတျနိုငျပါသညျ
“သူတောငျးစား လောကျအဆငျ့အတနျးမရှိတော့သော ကြှနျတျော”
ဘာရယျမဟုတျပါဘူး မနကေ့အတှအေ့ကွုံလေးကွောငျ့ခံစားမိတာလေးကို တငျပွတာပါကြှနျတျောတို့ထီလောကသားတှရေဲ့ အိပျမကျက ဘယျလိုဆိုတာ ဘျောဒါ တှအေသိဆုံးပါကိုယျ့ဆီက ဆုကွီးကံထူးသှားရငျ မြှျောလငျ့ခကျြတှတေော့ရှိမှာပေါ့ဗြာတခုပွောရအုံးမယျဗြ ကြှနျတျောရဲ့ထီရောငျးသကျတမျးက ၂၀၀၄ခုကစခဲ့တာဆိုတော့ ခုဖှငျ့တဲ့ ပငျရငျးအခြို့တောငျ မဖှငျ့ရသေးဘူး
လူအမြိုးမြိုး စိတျအထှထှေေ တှကွေုံ့ခဲ့ဘူးတယျဆိုပါတော့ဗြာခုလကျရှိအခြိနျပဲပွောပါ့မယျ ခုအစိုးရလကျထကျမှာ ဆုစနဈတှအေရတော့ ကြှနျတျောတို့ အမြားဆုံး အကွောငျးကွားရတာ ငါးသောငျးဆုတှပေါဆုကွီးပါဖို့ဆိုတာ အငျမတနျခဲရငျးပါတယျငါးသောငျးဆုတှအေကွောငျးကွားရငျ အရမျးဝမျးသာတဲ့သူတှကေတော့ မရှိတဲ့အခွခေံလူတနျးစားတှပေါပဲ
အလယျအလတျတှကေ သှားအကွောငျးကွားရငျ အမြားဆုံး ပွောတာက ငါးသောငျးဆုလောကျနဲ့ လာမပွောနဲ့တဲ့ ငါးထောငျလောကျမှပွောတဲ့😂😂ထားပါတော့ ဆုအကွောငျးကွားတဲ့အခါမှာ သိတတျမှုလေးတှပွေောပါရစေ ငါးသောငျးပေါကျလို့သှားပွောရငျ ညီလေး တဈသောငျးယူသှား ငါးထောငျ မငျးဖို့ဆိုပွီးပွောတာ အခွခေံလူတနျးစားတှပေါဝနျးနဲ့ခွံနဲ့ တိုကျနဲ့တာနဲ့နတေဲ့သူတှကေ မုနျ့ဖိုးမပွောနဲ့
ကိုယျကပဲ တောငျးပနျပီးပေးရမလိုကွုံတတျကွပါတယျ ဒါပမေဲ့တခုတော့ပွောတတျကွတယျ သိနျးတဈသောငျးခှဲပေါကျရငျ မငျးကို ကားဝယျပေးမယျ ဆုကွီးဆိုဘာပေးမယျ ဆိုပွီးတော့ပေါ့မနကေ့ ကံထူးရှငျ ကိုအစအဆုံးကူညီပေးခဲ့ပါတယျ
ထီတိုကျတာတောငျကြှနျတျောကpauk ဆော့ဝဲသုံးတော့ အရငျဆုံးအကွောငျးကွားခဲ့တာပါထားပါတော့ မနကေ့ အားလုံးပီးတော့ ကြှနျတေျာ့ကို ကြေးဇူးတငျတဲ့အတှကျ သိနျး 20ပေးပါတယျကြှနျတျော ဘယျကံထူးရှငျကိုမှ မုနျ့ဖိုးမတောငျးပါသူတို့ သဒ်ဒါ လို့ပေးတဲ့အခါ အနဲအမြား မတောငျးဆိုပါဘူးဒါပမေဲ့ တှေးကွညျ့ရငျနဲနတေယျလို့ ဘျောဒါ တှေ တှကျမိမှာပါဟုတျတယျလေ ငါးသောငျးပေါကျတဲ့သူတောငျ
အနဲဆုံးတော့ တဈထောငျပေးတတျကွမှပါခုက သိနျးငါးထောငျဆိုတော့ ဘျောဒါ တို့ ဒီကောငျ သိနျး100လောကျရမယျ ထငျမှာNo. No No ဘုရားစူးသိနျး20ပဲရပါတယျဗြာ
သိနျး ၅၀၀၀ မှာ သိနျး၁၀၀ရမယျမထငျနဲ့ ဘျောဒါတို့ရခေုခတျေမှာ သူတောငျးစားကို ၂၀တနျပေးရငျမယူဘူးကိုရငျလေးတှဆေိုလှငျ့ပဈမှာသိနျးငါးထောငျပေါကျလို့ သိနျး၂၀ ပေးတယျဆိုတာ သာမာနျ အခြိနျမှာ
တှကျတတျရငျသိမှာပါ ဘျောဒါတို့ရာလိုခငျြလို့ပွောပွတာမဟုတျဘူးနျောဘဝက မြှျောလငျ့ထားသလို အမွဲဖွဈတတျပါတယျရဲရငျ့အောငျသီခငျြးပဲနားထောငျနတေယျသီခငျြး နာမညျက”ဒီလောကျနဲ့ပဲ ကနြေပျပါတယျ”
**စကားမစပျ ကြှနျတျော သူတောငျစားတယောကျလောကျတောငျ သိက်ခာမရှိဘူးဖွဈသှားတယျ**
မညျသူကိုမှ မရညျရှယျပါလှူတနျး ပေးကမျးတယျဆိုပမေဲ့သူတောငျးစားတော့ ထမငျးဝအောငျ ကြှေးကပြါမထိမရောကျဆိုရငျ မလှူတာကောငျးပါတယျဘေးလူတှေ အကုသိုလျဖွဈနမှောစိုးလို့ပါ
#Kaung Lub Moe
ကောငျးလာဘျမိုးထီဆိုငျကွီး တောငျဒဂုံ မွို့နယျ
နောကျဆို ဒီထီသညျ နဲ့ ဒီထီဆိုငျကို ရှောငျနကွေဖို့ ဖျောပွလိုကျပါတယျ
“သူတောင်းစား လောက်အဆင့်အတန်းမရှိတော့သော ကျွန်တော်”
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး မနေ့ကအတွေ့အကြုံလေးကြောင့်ခံစားမိတာလေးကို တင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ထီလောကသားတွေရဲ့ အိပ်မက်က ဘယ်လိုဆိုတာ ဘော်ဒါ တွေအသိဆုံးပါကိုယ့်ဆီက ဆုကြီးကံထူးသွားရင် မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာတခုပြောရအုံးမယ်ဗျ ကျွန်တော်ရဲ့ထီရောင်းသက်တမ်းက ၂၀၀၄ခုကစခဲ့တာဆိုတော့ ခုဖွင့်တဲ့ ပင်ရင်းအချို့တောင် မဖွင့်ရသေးဘူး
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပါတော့ဗျာခုလက်ရှိအချိန်ပဲပြောပါ့မယ် ခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ဆုစနစ်တွေအရတော့ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး အကြောင်းကြားရတာ ငါးသောင်းဆုတွေပါဆုကြီးပါဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခဲရင်းပါတယ်ငါးသောင်းဆုတွေအကြောင်းကြားရင် အရမ်းဝမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့ မရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေပါပဲ
အလယ်အလတ်တွေက သွားအကြောင်းကြားရင် အများဆုံး ပြောတာက ငါးသောင်းဆုလောက်နဲ့ လာမပြောနဲ့တဲ့ ငါးထောင်လောက်မှပြောတဲ့😂😂ထားပါတော့ ဆုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ သိတတ်မှုလေးတွေပြောပါရစေ ငါးသောင်းပေါက်လို့သွားပြောရင် ညီလေး တစ်သောင်းယူသွား ငါးထောင် မင်းဖို့ဆိုပြီးပြောတာ အခြေခံလူတန်းစားတွေပါဝန်းနဲ့ခြံနဲ့ တိုက်နဲ့တာနဲ့နေတဲ့သူတွေက မုန့်ဖိုးမပြောနဲ့
ကိုယ်ကပဲ တောင်းပန်ပီးပေးရမလိုကြုံတတ်ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောတတ်ကြတယ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ရင် မင်းကို ကားဝယ်ပေးမယ် ဆုကြီးဆိုဘာပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့မနေ့က ကံထူးရှင် ကိုအစအဆုံးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်
ထီတိုက်တာတောင်ကျွန်တော်ကpauk ဆော့ဝဲသုံးတော့ အရင်ဆုံးအကြောင်းကြားခဲ့တာပါထားပါတော့ မနေ့က အားလုံးပီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက် သိန်း 20ပေးပါတယ်ကျွန်တော် ဘယ်ကံထူးရှင်ကိုမှ မုန့်ဖိုးမတောင်းပါသူတို့ သဒ္ဒါ လို့ပေးတဲ့အခါ အနဲအများ မတောင်းဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ တွေးကြည့်ရင်နဲနေတယ်လို့ ဘော်ဒါ တွေ တွက်မိမှာပါဟုတ်တယ်လေ ငါးသောင်းပေါက်တဲ့သူတောင်
အနဲဆုံးတော့ တစ်ထောင်ပေးတတ်ကြမှပါခုက သိန်းငါးထောင်ဆိုတော့ ဘော်ဒါ တို့ ဒီကောင် သိန်း100လောက်ရမယ် ထင်မှာNo. No No ဘုရားစူးသိန်း20ပဲရပါတယ်ဗျာ
သိန်း ၅၀၀၀ မှာ သိန်း၁၀၀ရမယ်မထင်နဲ့ ဘော်ဒါတို့ရေခုခေတ်မှာ သူတောင်းစားကို ၂၀တန်ပေးရင်မယူဘူးကိုရင်လေးတွေဆိုလွင့်ပစ်မှာသိန်းငါးထောင်ပေါက်လို့ သိန်း၂၀ ပေးတယ်ဆိုတာ သာမာန် အချိန်မှာ
တွက်တတ်ရင်သိမှာပါ ဘော်ဒါတို့ရာလိုချင်လို့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝက မျှော်လင့်ထားသလို အမြဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ရဲရင့်အောင်သီချင်းပဲနားထောင်နေတယ်သီချင်း နာမည်က”ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်”
**စကားမစပ် ကျွန်တော် သူတောင်စားတယောက်လောက်တောင် သိက္ခာမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်**
မည်သူကိုမှ မရည်ရွယ်ပါလှူတန်း ပေးကမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူတောင်းစားတော့ ထမင်းဝအောင် ကျွေးကျပါမထိမရောက်ဆိုရင် မလှူတာကောင်းပါတယ်ဘေးလူတွေ အကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ
ကောင်းလာဘ်မိုးထီဆိုင်ကြီး တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်
နောက်ဆို ဒီထီသည် နဲ့ ဒီထီဆိုင်ကို ရှောင်နေကြဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
ရနျကုနျမှာအလုပျလာလုပျပွီး ကိုဗဈကာလ နရေပျမပွနျရလို့ စိတျညဈနသေူတှအေတှကျ သတငျးကောငျး